प्रकृतिको बैँस फर्किने नयाँ वर्षको सँघारमा खेतीपातीका कुरा
- कृष्ण प्रसाद पौडेल | बुधबार, चैत २३
हिमालमा गयो जाडो लोक सब आनन्द देखियो
उदायो रसिलो राम्रो ऋृतु राज वसन्तको ।
लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति ।
स्व. कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले १०६ वर्षअघि वसन्त ऋृतुका बारेमा यी श्लोकहरू लेखेका हुन् । उनले 'ऋृतुविचार' खण्डकाव्यमा यसरी नै सबै ऋृतुकोे सटिक वर्णन गरेका छन् । माथिका श्लोकले वसन्तको आगमनको महत्त्वलाई उजागार गरेको छ । सानैमा सुनेका यी श्लोकहरूले हाम्रो बाल्यकालको स्मृति मात्र ताजा बनाउँदैनन्, प्रकृति र मानवबीचको अनुपम सम्बन्धको सचित्र वर्णनको कथा पनि भनिरहेका हुन्छन् ।
अंग्रेजीमा स्प्रिङ भनिने उत्पत्तिको अर्थ राख्ने यो याम वार्षिक जीवन ऊर्जाको मुख्य आधार हो । हामी उत्तरी गोलार्द्धको हिमालय शृंखलाको काखमा अवस्थित छौँ । हरेक वर्ष यति नै बेलाबाट यो पाखोको जीवन ऊर्जाका लागि प्रकृतिको बैँस फर्किन्छ । अहिले हामी जीवनचक्रको यो पेचिलो सत्यलाई आत्मसात् गर्न छाडेका छौँ । जसका कारण मानव र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको जालो निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ । परिणामतः खाना, खेतीपाती, जलवायु र समग्र प्रकृतिमा व्यापक फेरबदल आएको छ ।
हाम्रो यस्तो ऊर्जाशील वसन्तको सुरुवात अर्थात् हाम्रो जीवन ऊर्जाको पात्रो माघेझरीले हिउँदमा धुम्मिएको मधेस, शीतलहर र पहाडको सिरेटो सकिएसँगै सुरु हुन्छ । यही बेलाबाट प्रकृतिले उत्तरतर्फ ढल्किने पृथ्वीको सतहमा वार्षिक जीवन ऊर्जाका लागि उपयुक्त घामपानीको बन्दोबस्त मिलाउँछ । हिउँदमा सुषुप्त रहेको हावापानी घामको तातोले सक्रिय हुन्छ । यसले नै हाम्रो जीवन ऊर्जाको मूल आधार वनस्पति जगत्‌मा रौनक ल्याउने हो । यही ऊर्जाका आधारमा समग्र जीवन पद्धति चलायमान हुन्छ ।
धेरै वर्षदेखि यस्तो झरी भने राम्ररी भएको छैन । यदाकदा हुने हिउँदे झरी हुँदा पनि सबैतिर भएको छैन । खासगरी, मध्यपहाड र तराईमा माघेझरी त हुनै छोडेको छ । प्रकृतिलाई तहसनहस बनाउँदै जाँदा हप्ता दिनभन्दा बढी हुने झरी सुस्ताउँदै गएको हो । पोहोरसम्म एक/दुई दिन परेको पानी काठमाडौं खाल्टोमा यो वर्ष दुई/चार छिटा परेर टर्‍यो ।
यसरी हप्तौँसम्म हुने झरी अब यस्तै कवितामा मात्र सीमित हुने जोखिम बढेको छ । यसलाई उस्तै गरी फर्काउन नै त कति सकिएला तर प्रकृतिसम्मत खेती प्रणाली अपनाएर हाम्रो र भावी पुस्ताको स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ खानेकुरा खान पाउने हक स्थापित गर्न भने अझै पनि सकिन्छ । तर, यो मर्म आत्मसात् गर्ने किसानीको गौरवमय परम्परा उन्नत बनाउने यसको पूर्वसर्त हो ।
यस गोलार्द्धमा खानाका लागि गरिने उत्पादनका मुख्य सबै कर्म र प्रकृतिको सृष्टि थाम्ने मर्मको सम्मान विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वहरू जस्तै: वसन्त पञ्चमी, शिवरात्रि, होली (रङदिवस), उँधौली, सतुवान उत्सव मनाएसँगै सुरु गरिन्छ । यी दिवसहरू खानाका लागि खेतीपाती गर्ने किसानले सृष्टि थाम्न जुर्मुराएको बिउ, पालुवा र फक्रिँदै गरेको कोपिलाको स्वागत गर्ने उत्कृष्ट उत्सव हुन् । यस्ता अरु हजारौँ उत्सव विभेदको पर्खालमा चेपिएर बसेका छन् । यी संकृतिलाई यिनै बिउजस्तै उम्रिन, हुर्कन र कोपिलाजस्तै फक्रिन र फल्न दिने दिन कहिले आऊला ?
उत्तरी गोलार्द्धमा दिन लामो हुन थालेसँगै बिउ, बोटबिरुवाको सक्रियता बढ्छ । अर्को अर्थमा सृष्टि थाम्ने वार्षिक गतिविधि बढ्छ । वसन्त आगमनको सुरुसँगै जसरी प्रकृतिले आफ्नो वार्षिक ऊर्जा व्यवस्थापकको तयारी गर्छ, त्यसरी नै किसानले पनि आममानिसका लागि चाहिने ऊर्जा अर्थात् खानेकुरा उब्जाउने तयारी गर्छन् । यसो गर्ने किसानका आफ्नै ठाउँ विशेषका खेती संस्कृति छन् । यिनै संस्कृतिलाई उन्नत बनाउँदै हजारौँ वर्षदेखि किसानले खानाका लागि गरिने खेतीपातीको प्रणाली निरन्तर परिमार्जन गर्दै परिष्कृत गरेका छन् । माटोदेखि थालसम्म खानेकुरा जोहो गर्ने यो परम्पराका सबै ज्ञान, सीप र कौशलहरू प्रकृतिका यिनै गतिशील ऋृतुहरूमा आधारित छन् ।
माथि भनेझैँ वसन्त ऋृतु प्राकृतिक उत्पादनको मुख्य समय हो । यही समयमा बीजारोपण गरिने खेतीपातीले नै हाम्रो समग्र खानेकुराको बन्दोबस्त हुने हो । प्रकृतिको यो उत्पादनशील मौसममा खानेकुराको जगेर्ना गर्ने र अन्य प्रतिकूल मौसममा मानवीय उन्नतिका अन्य आयामहरूको तयारी र बन्दोबस्त गरिन्छ ।
विज्ञानको चमत्कारले प्रकृतिका नियम बुझेर हाम्रो जीवन सरल बनाउन त सकिएला तर यसमाथिको नियन्त्रण कति सम्भव होला ? यो त बहस गर्दै गरौँला । तर, अहिलेको खाना र खेतीपातीको संकट यसरी नै बढिरहे यो बहस गर्ने हाम्रो ल्याकत नै कति रहला ?
ऋतु फेरिएसँगै वस्तुभाउ र परिवारका साथ गरिने उँधौली उँभौली, बसाइसराइ, भोटदेखि नुन र हिमालदेखि जिम्बु लिएर तराईसम्म अन्नपात साट्न, आग्रादेखि चुरा, धागो पोते, सियो बेच्दै हिमाली बस्तीसम्मका सबै यात्रा यिनै बन्दोबस्तका लागि गरिन्छन् । हाम्रो यस्तो बन्दोबस्तका सबै सारथि यही बेला सँगै जुर्मुराउँछन् । चराचुरुङ्गी, कीरा–फट्याङ्ग्रा र सानाठूला वन्यजन्तुसमेत खानपानको बन्दोबस्त मिलाउँदै सन्तान उत्पादनमा सक्रिय हुन्छन् । हजारौँको बथानमा हजारौँ कोषको उडान भर्ने कर्‍याङकुरुङ, गौँथली, मलेवा, सुगा अब हाम्रा स्मृतिमा समेत ओझेल पर्दैछन् । यी सबै अब एकादेशका कथा भएका छन् ।
हजारौँ वर्षपहिलेदेखि सुरु भएको खेतीपातीको यो महायात्रा मानव सभ्यता र जनसंख्या वृद्धिसँगै सर्वत्र फैलिएको हो । तर, यो आधारभूत सत्य प्रकृतिदोहनको यात्रासँगै औपनिवेशी सत्ताको बलमिच्याइँमा पर्‍यो । यसले हाम्रा परम्परागत ज्ञान, सीप र कौशल ओझेलमा मात्र परेनन्; साम, दाम दण्ड, भेद अपनाएर जरैदेखि उखेलियो । अहिले हाम्रो समग्र प्रकृतिसम्मत जीवनपद्धति निरन्तर विघटनको बाटोमा छ । यसको आभास त बेलाबेलामा थपिएका बिपत्ति र महामारीले पनि दिइनै रहेका छन् । तर, यसको गर्भमा भने खानाका लागि गरिने खेतीपातीको मर्मविपरीत नाफाका लागि मात्र गरिने उत्पादन र यसका लागि मात्र उपयोगी सोच, ज्ञान, सीप र प्रविधि विकास गरेसँगै सुरु भएको हो । अहिले प्रकृतिको जीवनचक्रको मर्मको चरम बेवास्ता गरिएको छ ।
बितेका केही दशकमै हाम्रो ऊर्जाको वार्षिक बन्दोबस्तको यो परम्परा उल्ट्याएर शहरी बसाइ र बेमौसमी उत्पादनको सीमित घेराभित्र नाफाका लागि बाँच्ने, बिचौलिया जिन्दगीमा मात्र रमाउने सामाजिक व्यवस्था र यस्तो चेतना मात्र बढाउने शिक्षा पद्धतिको सिको गरेर नै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ । खासगरी हामीले बेमौसममा फलाउने र विष खाने तरिका अपनाएर आफू मात्र हैन, भावी पुस्ताको जीवनको मूल आधार माटो र प्रकृतिसमेत विषाक्त बनाएका छौँ ।
अहिले गरिएका आधुनिक कृषि विकासका कुनै पनि कार्यले यो मर्मको आत्मसात्‌ गर्दैनन् । बरु उल्टै आधुनिक हुने नाममा कृत्रिम मौसम, हावापानी र रसायनको बन्दोबस्त गरी धेरै नाफा कमाउने भन्दै बेमौसममा फलाउने सघन एकलबालीको होड नै चलेको छ । यसले माटो, प्रकृति र खानेकुरा विषाक्त बनाउँदै लगेको छ । हिजोआज खेतीपाती खानका लागि गरिँदैन, बेच्नका लागि मात्र गर्ने गरिन्छ । किसानलाई पैसा फलाउने बिचौलिया र व्यापारीले विस्थापित गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ । माटोको जीवात्मा मरेको छ । जैविक विविधता विघटनसँगै प्रकृतिह्रासले जलवायु र वातावरणमा गहिरो संकट थपिँदै लगेको छ । विषाक्त माटो र प्रकृतिको नसर्ने दीर्घरोगी दिनदिनै बढ्ने क्रम जारी छ । नयाँ जटिलता झन्‌झन् थप्दै लगेका छौँ । आफ्नै जीवनमा समृद्धि ल्याउने सपना बाँड्ने नेतृत्वको मुर्कट्टा प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
झण्डै दुई हजार वर्षपहिलेदेखि सुरु भएको प्रकृतिदोहनको मूल मान्यतामा आधारित रोमन सामाज्यको प्रकृतिमाथिको विजय र व्यापारका लागि गरिएको समुद्रीयात्रा औद्योगिक विकासको जग हो । यसैलाई विस्तार गर्न गरिएको विज्ञान र प्रविधि मात्र उन्नत जीवनको आधार हो भन्ने वैचारिकीको नियन्त्रणसँगै हाम्रो परम्परागत मौलिकताको विघटनयात्रा सुरु भएको हो । यसले नै हाम्रो ज्ञान निर्माणको मौलिक परम्परामा व्यापक फेरबदल ल्याएको हो । यस्तो फेरबदलको अग्र भागमा हामीले अपनाएको बाह्य ज्ञानमा आधारित कृषिशिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको मुख्य योगदान छ ।
आफ्नै विशेषताको मौलिक बौद्धिक परम्परालाई उन्नत बनाउने दूरदृष्टि नपुगेर नै यो दुरुह अवस्था भएको हो । यी कुरा बुझ पचाएर गरिने खाना र खेतीपातीका विलापले हाम्रो कृषि अब सप्रिँदैन । बरु यो दिनदिनै दुर्घटित हुँदै जान्छ । प्रकृतिलाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने किसानको विवेक र हाम्रा पुर्खाले ऋृतुविचारसहित बाँधेकोे प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्धको डोरो बलियो बनाए मात्र हाम्रो खाना र खेतीपाती सप्रिन्छ ।
विज्ञानको चमत्कारले प्रकृतिका नियम बुझेर हाम्रो जीवन सरल बनाउन त सकिएला तर यसमाथिको नियन्त्रण कति सम्भव होला ? यो त बहस गर्दै गरौँला । तर, अहिलेको खाना र खेतीपातीको संकट यसरी नै बढिरहे यो बहस गर्ने हाम्रो ल्याकत नै कति रहला ? यो कुराको छन्द त कोभिड १९ नामको आँखाले समेत नदेखिने सूक्ष्म जीवतत्त्व (जीवसमेत नबनिसकेको) बाट आतंकित आधुनिक मानव सभ्यताको हैसियतले नै देखाइदिएको छ ।
यी सबै प्रतिगमनका उल्टा यात्रा सल्ट्याउनेतर्फ सार्थक पहल गरिएन भने हाम्रो जीवनको मूल आधार खानाका लागि गरिने खेतीपातीको विघटनसँगै हाम्रो सभ्यतासमेत लोप हुने निश्चित छ । उन्नत समाज र यसको नेतृत्व फेर्न गरिने तेस्रो आन्दोलनको जग हाल्न तम्सेका वसन्तजस्तै ऊर्जावान् युवापुस्ताले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था त फेरिएला तर यो मर्म आत्मसात् गर्न र आफैँलाई फेर्न तयार नभए आममानिसको जिन्दगीमा बहार भने आउने छैन ।
अन्त्यमा ज्ञान निर्माणको अक्षारम्भ पर्वसँगै सुरु हुने यस वर्षको वसन्तले खानाका लागि खेतीपातीका आधारभूत मर्म बुझ्ने विवेकको तेस्रो आँखा खोलोस् । नयाँ वर्ष खानाका लागि खेतीपातीको वर्ष बनोस् । यही शुभकामना !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २३, २०७८, ०७:२५:४३